HR Archives - Business Centric Network (BCN)
HR, Overtime, Policy, Social Security Contribution, Tax
October 2, 2018 October 1, 2018 San Thida
ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့်ပါတ်သတ်လာရင် ပုံမှန် HR Manager လဲ မလိုအပ်ဘူး။ အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ HR ဝန်ထမ်းတွေခန့်ထားတော့လဲ အဆင်မပြေဘူး။ HR Department အတွက်လဲ Budget အများကြီးမရှိဘူး HR လုပ်ငန်းစဉ်တွေလဲ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင် Business Centric Network ကို အခုပဲ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ သင့်တင့်တဲ့ နှုန်းထားနဲ့ ဝန်ထမ်းရေးရာ ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေပါပြီ။ ၁) ဝန်ထမ်းရှာဖွေပေးခြင်း ၂) ဝန်ထမ်းရေးရာပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပေးခြင်း ၃) လစာတွက်ချက်ပေးခြင်း ၄)လူမှုဖူလုံရေးထည့်ဝင်ခြင်းအတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်း ၅) ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ခြင်း ၆)အလုပ်ရှင်၊အလုပ်သမား သဘောတူညီမှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း ၇) အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း ၈) လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်ရှိသင့် သော စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းများရေးဆွဲပြီး၊ လိုအပ်သော ပုံစံများပြင်ဆင်ပေးခြင်း ဆက်သွယ်ရန် ၀၉၉၆၀၈၉၇၈၇၄ [email protected] *** ဝနျထမျးရေးရာနှငျ့ပါတျသတျလာရငျ… Continue reading HR Services
September 11, 2018 September 7, 2018 San Thida
Right People, Right Place, Right Time with Right Skills လူမှန်၊နေရာမှန်၊အချိန်မှန်၊အရည်အချင်းမှန် *** လူမှနျ၊နရောမှနျ၊အခြိနျမှနျ၊အရညျအခငျြးမှနျ
September 9, 2018 September 9, 2018 San Thida
The rest of the picture Emerging technologies, new business models, changing customer behaviors and difficult economic conditions are forcing executives everywhere to fundamentally rethink the way they operate. And, as the business context evolves, so too do the skills and capabilities required to successfully operate within it. Simply put, real business value can only be… Continue reading The Right People,in the Right Place, at the Right Time
Factors influencing the workforce
September 8, 2018 September 5, 2018 San Thida
Factors influencing the workforce Human Resource Managers of large-scale organisations need to be aware of the factors that influence both the size and the quality of the workforce available to supply their services for employment.
September 7, 2018 September 5, 2018 San Thida
planning organising leading controlling creating communicating motivating employees
Business, Entrepreneurship, HR, Leadership, Management, Marketing, SME
SME Total Business Solution အသေးစား၊အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အလုံးစုံ စီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုများ အသေးစား၊အလတျစား စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားအတှကျ အလုံးစုံ စီးပှားရေးဝနျဆောငျမှုမြား
August 20, 2018 August 19, 2018 San Thida
SME Total Business Solution အသေးစား၊အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အလုံးစုံ စီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုများ သင့်လုပ်ငန်းလေးက အခုမှစတယ်။ လုပ်စရာတွေကများတယ်။ အမြဲတန်းဝန်ထမ်းတွေလဲ မခန့်ချင်သေးဘူး။ လုပ်ငန်းကိုလဲ စနစ်တကျ တည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင် Business Centric Network နဲ့သာချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး၊သင့်အတွက်လိုအပ်တာလေးတွေကို ကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ Total IT Solution(Software, Hardware, Infra) CCTV and Door Lock Employment Services Accounting Services Payroll Services Data Entry Services HR Consulting and Auditing Training and Consulting Website email and domain hosting စတာတွေကို သင့်တင့်တဲ့… Continue reading SME Total Business Solution အသေးစား၊အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အလုံးစုံ စီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုများ အသေးစား၊အလတျစား စီးပှားရေးလုပျငနျးမြားအတှကျ အလုံးစုံ စီးပှားရေးဝနျဆောငျမှုမြား
Tagged Business, Consulting, SME, SoftwareLeaveacomment